-KNU ဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုးရဲ့ ကြေညာချက်ကို ဗဟိုကော်မတီဝင်အများစု လက်မခံဘူးလို့… – PVTV Myanmar
-KNU ဥက္ကဋ္ဌ စောမူတူးစေးဖိုးရဲ့ ကြေညာချက်ကို ဗဟိုကော်မတီဝင်အများစု လက်မခံဘူးလို့ KNU ခေါင်းဆောင်တဦး ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း
-မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာလိုအပ်ချက်အတွက် ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကို ဂျပန်နိုင်ငံက ပံ့ပိုးကူညီ
-ဖေဖေါ်ဝါရီလ ကတည်းက စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြုံနေရတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်အောင် ထွက်ပြေးလာသူတွေကို ထိုင်းအစိုးရက အတင်းအကြပ်ပြန်ပို့မှာ မဟုတ်ဖူးလို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Prayuth Chan-ocha က ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner Burgener ကို ကတိပြုပြောဆို
-ကိုရီးယားနိုင်ငံက လူသားအရင်းအမြစ် အနုပညာကျောင်း (Saram School of Art) က အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကို အလှူငွေပေးအပ် စတဲ့ PVTV ရဲ့ ညနေပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 7.4K Share – 943
Thank Japan and Korea for your kind Supports.
Why don’t you declare the NCA dead and buried like you did to the 2008 constitution? Like before, better late than never.
Do us allafavour and please get your priorities right. Win the peace and release the leaders by defeating the junta.
KNU ရေ အခုချိန်မှာ သွေးမကွဲကြပါနဲ့
2021-05-15 at 8:56 PM
ဂျပန် အစိုးရ နဲ့ ထိုင်း အစိုးရ ကိုကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်
2021-05-15 at 9:50 PM
ပြည်ပက အလျူကိုယ် ကိုယ်တိုင်လာလျူခွင့်ရမှ လာလျူပါ ဖွတ်လက်မရောက်စေနဲ့ ဖွတ်လက်ထဲရောက်ရင်တော့ သိတဲ့တိုင်းပဲ့ သူတို့ ဆွေမျိုးတွေ သူတို့စစ်ခွေးအလေတွေကိုယ် အရင်လုံလုံလောက်လောက်ပေးမယ် ပေးပြီးမှ စားကြွင်း စားကျန်ကိုယ် သူတို့အမိန့် နာခံတဲ့ နွားတွေ အရိုးကိုက်တွေကိုယ်ပေးမယ် အဲ့ကနေမှ တဆင့် နီးစပ်ရာ ပြည်သူတွေကိုယ် နဲနဲလေးပေးပြီး နာမည်ကောင်းယူမယ် ခေတ်ဆက်ဆက်လုပ်နေကျ အလုပ် စစ်မိစ္ဆာခွေးအတွေ အကွက်
2021-05-15 at 10:01 PM
စစ်ဖက်တိုက်ခိုက်ရေးတွင် အသုံးပြုသည့် လက်နက်များကို ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း မင်းတပ်တွင် အသုံးပြုသကဲ့သို့ စစ်တပ်မှ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ်တွင် အသုံးပြုနေခြင်းမှာ အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် စစ်အာဏာရှင်အဖွဲ့သည် မည်၍မည်မျှ မိုက်တွင်းနက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်သက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ အရပ်သားပြည်သူများအပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် စစ်တပ်ကို မိမိတို့ တောင်းဆိုပါသည်။
The military’s use of weapons of war against civilians, including this week in Mindat, isafurther demonstration of the depths to which the regime will sink in order to hold onto power. We call on the military to cease violence against civilians.
2021-05-15 at 10:13 PM
တိုက္ေမာင္းသၤေစာင့္ယင္းဒါးေသြးၾကမည္ တို႔ျပည္သူေတြ စံုစံုညီ။
2021-05-15 at 11:06 PM
တိုင်းရင်းသားအရေး လေးနက်ပါသည်။ များပြား ရှုတ်ထွေးပါသည်။
ဥပမာ ကရင်အမျိုးသား အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ တပ်မဟာတွေ များတယ်။ အသံထွက်မတူတာတွေ ကြားရမယ်။ တိုက်ပွဲတွေ၊ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေ ပြောဆိုထုတ်ပြန်တာတွေ ကြားရမယ်။
ကရင်တွေထဲမှာ KNU, DKBA, KNU-PC, DKBA(NCA မထိုး), BGF, Concerned Group စသဖြင့် ကွဲပြားနေသလို ရှမ်းတွေထဲမှာလဲ RCSS, SSPP, မိုင်းလား-NDAA−တပ်မဟာ ၇၆၈၊ စိန်ကျော့ပြည်သူ့စစ်၊ ကာလိပြည်သူ့စစ်၊ ဟိုမိန်းပြည်သူ့စစ်၊ မန်ပန်ပြည်သူ့စစ်၊ မတ်ကျန်းပြည်သူ့စစ်၊ နားယိုင်းပြည်သူ့စစ်၊ တပ်မဟာ ၇၅၈ ပြည်သူ့စစ် စသဖြင့် အများကြီးပါဘဲ (Khun Gamani)
သူတို့မှာ နောက်ခံသမိုင်းတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ အကျိုးစီးပွါးတွေရှိတယ်။ နောက်ကနေ တွန်းတာ၊ ရှေ့ကနေ ဆွဲတာ၊ ဘေးကနေ ဖိတာ၊ တိုက်တာတွေလည်းရှိကြတယ်။ သူ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့သူ။
သူတို့သမိုင်းက အတော်ကိုရှည်ခဲ့ပြီ။ အသက်ပေးခဲ့ရတာတွေလည်း များခဲ့ပြီ။
ဝါကျလေး တကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူးပြောတာတွေ မလုပ်သင့်ကြပါ။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအားလုံးဟာ သွေးသားတော်စပ်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။
ပုံ – တချိန်က မာနယ်ပလော
Khine Nwayoo says:
တော်လှန်ရေးကြီး အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်ကြရင် လူသားချင်း စာနာထောက်ထား သော နိုင်ငံများ၏ ကျေးဇူးကို အထူးဆပ်ပါမည် အမေရိကန် တောင်ကိုရီးယား ဂျပန် စသည့်နိုင်ငံများ
2021-05-16 at 6:35 AM
How come that the leader of KNU issued another different statement? That bald headed man is saying different thing. It won’t help to solve the current situation..
2021-05-16 at 6:50 AM
2021-05-16 at 7:09 AM
နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုအားကူညီ​ထောက်ပံ့ခြင်းအားလုံးသည် လက်ရှိ နိုင်ငံ၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုလုယူထားငည့် လူယုတ်မာများနှင့် ကင်းရှင်းစွာ​ပေးလှူဘို့လိုပါသည်.. နာဂစ်အလှူများကိုခိုးယူခဲ့သူများ၏ အနွယ်အဆွယ်များသည် မည်သည့်​နေရာမှမဆို ခိုးယူသည့်သူများဖြစ်ပါသည်..
ဆရာကြီး​ဒေါက်တာ​ဇော်​ဝေစိုး၏​ပြောကြားချက်အား အပြည့်အဝ ​ထောက်ခံပါသည်.. ကျ​​နော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံး လိုက်နာလုပ်​ဆောင်ပါစို့…
2021-05-16 at 8:00 AM
2021-05-16 at 8:07 AM
2021-05-16 at 9:24 AM
ခန့့္ခန့္ ခန့္ခန့္ says:
2021-05-16 at 9:47 AM
Aung Lin Soe says:
2021-05-16 at 11:04 AM
ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့် တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအချိန် ကာလဟာ အရမ်းအရေးကြီးနေလို့ စည်းစည်းလုံးလုံး ဖြင့် နေပေးကြပါလို့….ကျူပ်တို့ပြည်သူတွေ စိတ်ဓာတ်ကျသွားရင် အချိန်ပိုကြာပြီး အာဏာရှင် အတွက် ပြင်ဆင်ချိန် ပေးသလိုဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ..သန်းခေါင်ထက်တော့..ညဥ့်မနက် တော့ပါဘူး…စစ်အာဏာရူး တေ ပြုပ်ကို ပြုပ်ကျစေရမည်…နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်..လူပါး ဝ လာတဲ့ ကောင်တေ..မျိူးမစစ် မ သားတေ.
2021-05-16 at 11:53 AM
2021-05-16 at 12:07 PM
2021-05-16 at 3:49 PM
2021-05-16 at 3:51 PM
2021-05-16 at 5:03 PM
ေအးမြန္ ေအးမြန္ says:
2021-05-16 at 5:54 PM
Khinmg Aye says: